Malvertising: Inona no dikan'izany amin'ny fampielezana nomerika ataonao? | Martech Zone
Ny taona manaraka dia kasaina ho taona manentana ho an'ny marketing nomerika, miaraka amin'ireo fanovana mpisava lalana tsy tambo isaina amin'ny tontolon'ny Internet. Ny Internet of Things ary ny firosoana amin'ny zava-misy virtoaly dia manome ny fahafaha-manao vaovao amin'ny varotra an-tserasera, ary ny fanavaozana vaovao amin'ny rindrambaiko dia mijanona eo an-toerana hatrany. Mampalahelo anefa fa tsy ny rehetra no mivoatra fa miabo.
Isika izay miasa an-tserasera dia miatrika ny loza mety hitranga amin'ireo mpanao heloka bevava amin'ny cyber, izay tsy mitsahatra mitady fomba vaovao hidirana ao amin'ny solosainantsika ary hanimba. Mampiasa ny Internet ny hackers amin'ny fanatanterahana ny halatra maha-izy azy ary hamorona malware mania izay miha mandroso. Ny fitrandrahana malware sasany, toy ny ransomware, dia manana ny fahaizany mihidy ny solo-sainanao iray manontolo - loza iray raha manana fe-potoana lehibe ianao sy angon-drakitra tsy voavidy ao. Amin'ny farany, ny mety hitrangan'ireny olana ireny miteraka fatiantoka ara-bola be na manidy orinasa tanteraka dia avo kokoa noho ny teo aloha.
Miaraka amin'ny fandrahonana maro be manotrika ao amin'ny halalin'ny tranonkala, mety ho mora ny tsy mahita ny aretina toa tsy mampidi-doza, toy ny sombin-kafatra diso - marina? Diso. Na ny endrika malware tsotra indrindra aza dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny fampielezana varotra nomerika anao, noho izany ilaina ny fahaizanao tsara ny risika sy ny vahaolana rehetra.
Inona no atao hoe Malvertising?
Malvertising - na dokambarotra manimba - dia fomba fiasa manazava tena fotsiny. Izy io dia manana endrika dokam-barotra amin'ny Internet mahazatra, saingy, raha tsindrio, dia hampita anao amin'ny sehatra voan'ny aretina. Izany dia mety hiteraka fahasimbana amin'ny fisie na koa fanodinkodinana ny masininao.
Hitan'i 2009 aretina iray ao amin'ny tranokalan'ny NY Times misintona ny tenany amin'ireo solosaina mpitsidika ary mamorona ilay nanjary fantatra amin'ny anarana hoe "Bahama botnet '; tambajotranà masinina ampiasaina hanaovana hosoka an-tserasera marobe.
Na dia maro aza no mino fa tsy dia mazava loatra ny mahita fa diso - satria matetika izy io dia miendrika pop-up pôrnôgrafia na mailaka fivarotana - ny tena izy dia manjary fetsy ny hackers mpanao ratsy.
Androany, mampiasa fantsona fanaovana doka ara-dalàna izy ireo ary mamorona dokambarotra azo inoana fa matetika ilay tranonkala dia tsy mahafantatra akory fa voan'ny virus izy io. Raha ny marina, mpanao heloka bevava an-tserasera izao dia lasa mpisava lalana tokoa amin'ny asa-tanany ka mandalina ny psikolojia olombelona mihitsy aza izy ireo hahafantarana ny fomba tsara indrindra hamitahana ireo traboina sy hidina ambanin'ny radara.
Ity fivoarana mampalahelo ity dia midika fa mety hitondra viriosy dieny izao ny fampielezan-kevitra nomerika ataonao, nefa tsy tsapanao akory. Sary ity:
Orinasa toa ara-dalàna no manatona anao ary manontany raha afaka mametraka doka amin'ny tranokalanao izy ireo. Manolotra fandoavam-bola tsara izy ireo ary tsy misy antony tokony hiahiahanao azy ireo, ka manaiky ianao. Ny tsy fantatrao dia ny fandefasan'ity doka ity ny ampahany amin'ireo mpitsidika anao any amin'ny faritra iray voan'ny virus ary manery azy ireo hifindra virus nefa tsy tsapany akory. Ho fantatr'izy ireo fa voan'ny virus ny solo-sain'izy ireo, saingy ny sasany tsy hiahiahy akory fa ny doka no nanombohana izany olana izany, midika izany fa hitohy hamindra olona ny tranonkalanao mandra-pahatongan'ny iray saina.
Tsy toe-javatra tianao hahatongavana izany.
Malvertising dia efa làlana miakatra tsara be miakatra hatramin'ny nahitana azy voalohany tamin'ny taona 2007 raha toa ka marefo ny Adobe Flash Player dia namela ireo mpijirika handavaka ny talon'izy ireo tao amin'ireo tranonkala toa an'i Myspace sy Rhapsody. Na izany aza, nisy hevi-dehibe vitsivitsy tao anatin'ny androm-piainany izay afaka manampy antsika hahatakatra ny fomba fivoarany.
Tamin'ny 2010, ny Online Trust Alliance dia nahita fa tranokala 3500 no nitondra ity endrika Malware ity. Taorian'izay dia noforonina ny vondron'orinasa miampita orinasa hanandrana sy hiady amin'ny fandrahonana.
2013 no nahitana an'i Yahoo nokapohina tamin'ny fampielezan-kevitra malvertising manaitra izaitsizy izay nitondra azy iray amin'ireo endrika voalohany amin'ny ransomware voalaza etsy ambony.
Cyphort, orinasam-piarovana lehibe iray, dia milaza io malvertising io dia nahita fiakarana 325 isan-jato tamin'ny valanoranony tamin'ny 2014.
Tamin'ny 2015, nandeha an-tserasera ity fanapahana solosaina mahasosotra ity, araka ny hitan'i McAfee tao amin'izy ireo tatitra isan-taona.
Androany, ny malvertising dia ampahany amin'ny fiainana nomerika toy ny fanaovana doka ihany. Midika izany, amin'ny maha mpivarotra an-tserasera anao, zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny fampahafantarana ny loza mety hitranga aorian'izany.
Ahoana no mety hampidi-doza azy?
Mampalahelo fa amin'ny maha mpivarotra azy ary mpampiasa solosaina manokana, avo roa heny ny fandrahonana anao amin'ny malvertising. Voalohany, mila miantoka ianao fa tsy misy dokambarotra voan'ny piggyback mankany amin'ny fampielezana ny varotrao. matetika, dokam-barotra avy amin'ny antoko fahatelo dia mpamily ara-bola lehibe ao ambadiky ny fampiroboroboana an-tserasera ary, ho an'ireo olona maniry fatratra ny asany, midika izany fa mahita ny mpanome vola avo indrindra hameno ny toerana tsirairay amin'ny doka.
Noho io dia ilaina ny mahatsapa ny loza ateraky ny fanolorana ny doka amin'ny doka amin'ny alàlan'ny tolotra tena izy; fandalinana tranga ity manome fijery amin'ny antsipiriany kokoa momba ny olana mety hitranga amin'ity paikady fitadiavam-bola amin'ny Internet ity. Raha ny tena izy dia milaza izy fa ny tolotra amin'ny fotoana tena izy - dia ny fanaovana lavanty ny elanelan'ny doka misy anao - dia atahorana bebe kokoa izany. Manasongadina izany satria ny dokam-barotra novidiana dia ampiantranoina amin'ny lohamilina antoko fahatelo, izay manimba ny fifehezana izay tokony hanananao ny atiny.
Toy izany koa, amin'ny maha-mpivarotra an-tserasera anao dia ilaina ny misoroka ny otrikaretina viriosy ny tenanao. Na dia manana fisehoana madio an-tserasera madio aza ianao, ny fomba fanao amin'ny fiarovana manokana dia mety hahatonga anao hamoy ny angon-drakitra sarobidy. Isaky ny mifanakalo hevitra momba ny filaminan'ny Internet ianao dia ny fanaonao manokana no tokony hatao laharam-pahamehana. Hiresaka momba ny fomba hitantanana bebe kokoa an'ity amin'ny paositra izahay.
Rehefa miresaka momba ny loza mety hitranga amin'ny fanodikodinam-bola, maro no tsy mahatakatra ny antony maha-zava-dehibe azy io - azo antoka fa azonao esorina fotsiny ilay doka voan'ny aretina, ary lasa ny olana?
Mampalahelo fa tsy izany matetika no misy. Miovaova hevitra tokoa ireo mpampiasa Internet ary, rehefa miha malaza ny fandrahonana hacks, dia hanao izay rehetra azony atao izy ireo mba tsy ho tratry ny loza. Midika izany fa amin'izay azontsika antsoina hoe 'scenario tsara indrindra' - izany hoe mipoitra tampoka ary manala azy alohan'ny fotoana mety hiteraka fahasimbana - mbola misy ny mety hamoahana ny fampielezankevitrao tsy azo averina.
Ny laza malaza amin'ny Internet dia miha-manandanja ary ny mpampiasa dia te-hahatsapa ho toy ny mahafantatra sy matoky ireo marika nomeny ny volany. Na ny fambara kely amin'ny olana mety hitranga aza dia hahita any an-kafa izy ireo hampiasana ny fotoany sy ny volany.
Ny mantra an'ny injenieran'ny fiarovana tsara dia: 'Ny fiarovana dia tsy vokatra, fa dingana iray.' Izany dia mihoatra ny famolavolana ny cryptography matanjaka ho lasa rafitra; izy io dia mamolavola ny rafitra iray manontolo mba hiarahan'ny fepetra fiarovana rehetra, anisan'izany ny cryptography. Bruce schneier, Cryptographer mpitarika sy manam-pahaizana momba ny fiarovana amin'ny solosaina
Raha ny cryptography manokana dia tsy hahavita hiatrika malvertising manokana, mbola ilaina ihany ny fihetseham-po. Tsy azo atao ny manangana rafitra iray izay hanome fiarovana tonga lafatra. Na dia mampiasa ny haitao tsara indrindra aza ianao dia mbola misy ny scam izay kendrenao ilay mpampiasa fa tsy ny solosaina. Raha ny tena izy dia inona no ilainao protokol fiarovana, izay dinihina sy havaozina matetika, fa tsy rafitra tokana.
Ireto dingana manaraka ireto dia zava-dehibe rehetra hanampiana anao amin'ny fiatrehana ny olana tsy mitsaha-mitombo ao amin'ny malvertising.
Miaro ny tenanao amin'ny Malvertising
hametraka efitrano fiarovana feno. Betsaka ny fonosana fiarovana tsara azo ampiasaina. Ireo rafitra ireo dia hanome fizahana tsy tapaka ao amin'ny masininao ary hanome ny laharana fiarovana voalohany raha voan'ny virus ianao.
Kitiho hendry. Raha miasa an-tserasera tsy tapaka ianao dia tsy fahendrena ny fikitihana ny rohy doka rehetra hitanao. Mifikitra amin'ny tranokala azo antoka ary hampihena be ny risika mety haratanao.
Mihazakazaha Ad-Blocker. Ny fihazakazahana dokam-barotra dia hampihena ny haben'ny dokam-barotra hitanao ary noho izany, hanakana anao tsy hiditra amin'ny voan'ny aretina. Na izany aza, satria ireo fandaharana ireo dia tsy manao afa-tsy dokam-barotra manelingelina, ny sasany mety mbola hisisika ihany. Toy izany koa, ny fitomboan'ny isan'ny domains dia manakana ny fampiasana ny ad-block rehefa miditra ao aminy.
Atsaharo ny Flash sy Java. Misy malware marobe aterina amin'ny solosaina farany amin'ny alàlan'ireto plug-in ireto. Ny fanesorana azy ireo koa dia manaisotra ny fahalemena.
Fiarovana ny fampielezana nomerika anao amin'ny Malvertising
Mametraha plug-in antivirus. Indrindra raha mampiasa tranokala WordPress ianao amin'ny marketing, misy izany plug-in tsara maro any izay afaka manome fiarovana manohitra ny virus.
Doka nampiantranoina tamim-pitandremana. Amin'ny fampiasana ny fahaiza-misaina dia mety ho mora ny mahita raha somary manjavozavo ny doka ataon'ny antoko fahatelo. Aza matahotra ny manidy azy ireo mialoha raha tsy azonao antoka.
Arovy ny tontonana admin. Na ny media sosialy, ny tranokalanao na ny mailakao aza, raha misy hacker afaka miditra amin'ny iray amin'ireo kaonty ireo, dia ho mora amin'izy ireo ny mampiditra kaody ratsy. Ny fitazonana ny tenimiafinao ho sarotra sy azo antoka dia iray amin'ireo fiarovana tsara indrindra hialanao amin'izany.
Fiarovana lavitra. Misy ihany koa ny risika lehibe amin'ireo cybercriminaliten izay mahazo fidirana amin'ny kaontinao amin'ny alàlan'ny tambajotra WiFi tsy misy filaminana. Ny fampiasana Network Virtual Private (VPN) rehefa mivoaka sy manodidina dia hampiditra ny angon-drakitrao amin'ny alàlan'ny famoronana fifandraisana voalohany azo antoka eo aminao sy ny mpizara VPN.
Ny malvertising dia fahasosorana mahasosotra an'ireo mpivarotra an-tserasera rehetra; iray izay tsy toa mandeha any ho any intsony atsy aoriana kely. Na dia tsy azontsika atao mihitsy aza ny mahalala ny ho avy amin'ny resaka malware, ny fomba tsara indrindra hijanonana eo alohan'ireo mpijirika dia ny mizara hatrany ny tantarantsika sy ny toro-hevitray amin'ireo mpampiasa Internet namana.
Raha efa nanana traikefa tamin'ny fanodikodinam-bola na singa hafa amin'ny fiarovana marketing nomerika ianao dia aza hadino ny mametraka hevitra etsy ambany! Ny hevitrao dia handeha lavitra hanampy amin'ny famoronana ho avy azo antoka amin'ny Internet ho an'ny mpivarotra sy ny mpampiasa.